Natron: fampiharana firaketana nomerika mitovy amin'ny After Effects | Avy amin'ny Linux
Leviora rindrambaiko loharano malalaka sy malalaka mamela antsika hamorona nomerika, ity fampiharana ity dia voataonan'ireo rindrambaiko firaketana nomerika samihafa toy ny SoftEddie, Avid Media Illusion, Apple Shake, Blackmagic Fusion, Autodesk Flame, ary Nuke, izay ahazoana ny mpampiasa interface sy ny maro amin'ireo foto-keviny.
Leviora manohana plugins manaraka ny OpenFX 1.4 API. Ny ankamaroan'ny plug-in OpenFX loharano misokatra dia tohana.
1 Momba an'i Natron
2 Ahoana ny fametrahana an'i Natron amin'ny Linux?
Momba an'i Natron
Ny fandaharana dia novokarin'ny Blackmagic Fusion ho maimaim-poana, azo entina, lampihazo, ary manolora fitaovana matanjaka sy mahomby ho an'ny mpamoron-kira hahatratrarana vokatra avo lenta sy taha ambony.
Leviora manana mpampiasa interface mahazatra, mora hivezivezy sy manaingo azy, ary misy ny fanohanana ny sary fisehoana marobe sy retina amin'ny MacOSX.
Maivana ny programa (ampitahaina amin'ireo programa hafa amin'ity sokajy ity), ary raha hampiasa azy io dia mila manana solosaina tsy misy fampiasa farafahakeliny 2.3 GHz na avo kokoa fotsiny ianao, miaraka amina RAM 3 GB farafahakeliny sy karatra sary mifanaraka amin'ny OpenGL 2.0 sy OpenGL 1.5 misy fanitarana sasany.
Betsaka aminareo no hahafantatra fa tsy misy ny vokatra Adobe ho an'ny sehatra Linux, ka i Natron dia safidy tsara indrindra aorian'ny After Effects izay mendrika ny andramana ary andramana.
Leviora Manana ireto toetra manaraka ireto izy, izay azontsika asongadino:
Fifanarahana mpampiasa mahay mandanjalanja : Natron dia mikendry ny tsy hanapaka ny fahazarana amin'ny alàlan'ny fanomezana fampifangaroana mpampiasa mahazatra sy mahazatra. Ny mpampiasa mpampiasa sary dia azo zaraina amin'ny efijery maromaro. Izy io dia manohana ny fampisehoana Retina amin'ny MacOSX.
Multitask : Natron dia afaka mamoaka sary marobe miaraka amin'izay ary mampiasa 100% ny herin'ny computing an'ny CPU-nao.
Solontenan'ny tambajotra: Natron dia azo ampiasaina ho fitaovana fampitaovana ary afaka ampidirina amin'ny mpitantana toeram-pambolena toa an'i Afanasy.
Natron renderer- Fitaovana zana-kaomandy handefasana ny script Python sy ny fisie tetikasa. Ny kinova amin'ny baiko dia azo tanterahina avy amin'ny ssh amin'ny solosaina tsy miseho.
Mpijery haingana sy mifanerasera - Zoom-panorona / vilany tsy miova sy marina na dia amin'ny haben'ny sary lehibe aza (andrana amin'ny sary 27k x 30k).
Playback amin'ny fotoana tena izy : Natron dia manome playback amin'ny fotoana tena izy noho ny teknolojia cache RAM / disk. Raha vantany vao omena ny frame dia azo averina aorina avy hatrany aorian'izay, na dia ho an'ny haben'ny sary lehibe aza.
Fanovana ny fihetsehana : Natron dia manolotra fomba tsotra sy mahomby amin'ny fiatrehana ny keyframes miaraka amina tonian-dahatsoratra curve tena marina sy intuitive. Azonao atao ny mametraka ny fitenenana amin'ny tsipika mihetsika mba hamoronana hetsika mora sy inoana ho an'ny zavatra.
Natron koa dia mampiditra takelaka fampahalalana feno fampisehoana ho an'ny fanovana haingana ny rakitsary sy ny keyframes ao amin'ny habakabaka.
Fandehanana miasa marobe: Mamonjy fotoana i Natron amin'ny fitazonana ny fomba fijery rehetra hitovizany. Azonao atao ny manala ny fomba fijery amin'ny fotoana rehetra amin'ny node OneView.
Rotoscopy / Rotopainting- Amboary ny hodinao ary velomy izy ireo hiasa amin'ny tifitra sarotra
Fanoratana amin'ny Python: Natron dia nanao ny ankamaroan'ny fampiasa misy azy tamin'ny alàlan'ny Python API.
Ahoana ny fametrahana an'i Natron amin'ny Linux?
Raha te hametraka an'ity rindranasa ity amin'ny rafitrao ianao dia tsy maintsy mandeha mankamin'ity rohy manaraka ity izay ahafahanao misintona ny rindranasa.
Amin'ny tranga Debian, Ubuntu ary ny derivatives ireo dia tsy maintsy manokatra terminal ianao ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Ary ny apetrakao amin'ny mpitantana fampiharana tianao na amin'ity baiko ity:
Para ny raharaha Fedora, CentOS, openSUSE na fizarana miaraka amin'ny fanohanan'ny fonosana rpm dia tsy maintsy ataonao ity baiko ity:
Para apetraho amin'ny openSUSE na iray amin'ireo derivatives-ny, sokafy terminal ary mihazakazaka:
Raha apetraka ao amin'ny Fedora, RedHa, CentOS sy ny derivatives azy dia ampiasao ity baiko manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Natron: fampiharana fanoratana nomerika mitovy amin'ny After Effects
Rafa Mar Multimedia dia hoy izy:
Tena tsara ilay lahatsoratra, saingy somary nanambony tena ny lohateny, satria Natron dia 10% taorian'ny effets. Ny fanitsiana video dia teboka malemy amin'ny linux. Toy ny amin'ny fanovana sary dia manana krita na gimp ary amin'ny blender 3D isika, amin'ny resaka montage video sy ny famoronana dia misy banga hofenoina.
Mamaly an'i Rafa Mar Multimedia